EURO 2016: Gerard Pique oo furtay xulkiisa Spain ciyaar ay sidey doonaan ka yeesheen balse ku adkaatay goosha+SAWIRRO – Gool FM
EURO 2016: Gerard Pique oo furtay xulkiisa Spain ciyaar ay sidey doonaan ka yeesheen balse ku adkaatay goosha+SAWIRRO
Byare June 13, 2016
(France) 13 Juunyo 2016. Xulka xafidanaya koobka Euro ee Spain ayaa guul 1-0 ka gaaray xulka Czech Republic ciyaar uu siduu doono ka yeelanayay.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-0.
Waxaan daawanay qeybtii hore ciyaar hal dhinac ah ay awoodeeda oo dhan ay gacanta ku heyso xulka Spain oo suu doono ka yeelanayay ciyaarta.
Waxaaba la dhihi karaa waxaa wada ciyaaray xulka lagu naaneyso La Roja ee Spain iyo goolhayaha xulka Czech Republic ee Petr Cech.
Ciyaartan qeybteedii hore sida ay u maamulaneysay Spain oo ay xoog ugu heysatay waxaa la dhihi karaa inay tahay ciyaarta ilaa hadda Euro 2016 ee hal koox iska maamulato ciyaarta way jireen kooxo kala awood badnaa laakiin sida ciyaartan oo kale ma ahayn.
Cech ayaa fursado badan ka bad-baadiyay xulka Spain oo ay ugu muhiimsanaayeen midii Alvaro Morata iyo David Silva oo uu ku soo baxay isagoo kala wareego islahaa.
Xulka Spain ayaa isku dayay 378-baas qeybtii hore ee ciyaarta waana baasaskii ugu badnaa ilaa iminka qeybta hore ee tartanka Euro 2016.
Spain ayaa sidoo kale laga dhaliyay hal gool oo qura 16-kii saacadood ee ugu dambeysay kubbada cagta ee Euro.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad xulka Spain ayaa ku bilowday ciyaarta si ka daran tii qeybtii hore oo durba fursado ayaa laga bad-baadiyay markii ay bilaabatay qeybtii labaad.
Daqiiqadii 56-aad wixii la weeraraba xulka Czech Republic waxay heleen fursad raqiis ah daqiiqadii 56-aad kaddib markii bulusuyoon la soo qaday uu lugta la helay Hubnik laakiin waxaa duubtay goolhaye De Gea maadaama uu laad sahlan ahaa.
Czech ayaa heshay fursad kale daqiiqadii 64-aad kubbad aad u halis ahayd oo waxaa koorno la soo qaaday madax galay mid ka mid ah xiddigaha Czech, waxaa iyadoo shabaqa ku sii socota soo bixiyay Cesc Fabregas.
Fursad aad u qaali ah ayaa waxay soo martay xulka Spain Silva aya si qiyaano ah kubbada ugu xaday David Alba laakiin kontoroolkii ayaa ka dheeraaday daafaca ayaana ka bixiyay mar ay kubbada dhaaftay goolhayaha.
Kubbad kale oo halis ahayd Iniesta ayaa u taagay Silva oo diilinta ganaaxa afkeeda taagan inta baaciyay daafacyada ayuu u qabtay balse cagtii lugta bidix ayaa ka martay goosha dhinaceeda daqiiqadii 72-aad.
Aduriz oo lagu soo badelay Morata ayaa noqday laacibkii ugu da’da waynaa Spain ee u matala tartanka Euro 35-sano iyo 122-maalmood.
Ugu dambeyn wuxuu xulka Spain raadiyo gool waxaa furtay oo guusha u gacan galiyay xulkiisa daafaca Barcelona Gerrard Pique oo gool madaxa ah u dhaliyay daqiiqadii 87–aad ee ciyaarta kubbad uu dhinac ka soo qaaday Iniesta.
Czech ayaa helay fursad uu ku bar-bareyn karay ciyaarta 3-dii daqiiqo ee lagu daray kaddib markii uu laacibka u xirta lambarka 22-aad uu goolhaye De Gea ka bixiyay laad yare kulul.
Sababta Lionel Messi uu garka u daystay oo la ogaaday!
SAWIRRO: Miralem Pjanic oo si RASMI ah uga mid noqday kooxda Juventus